Somaliland ma inqilaab (kacaan) baa ka dhacay. Waar hooy, duduro geel baa ku jaba.Your Everyday News
December 3, 2019 Booddaale News Opinions 0
W/QCabdirizak Axmed Jamac
Qoraalkan waxaan la beegsanayaa wadaniyiinta waxgaradka ah ee Reer Somaliland oo qudha. Hadda ogow, kuma jiraan wax ma kasta, maangaabka, dilaalka iyo dib u socodku toona.
Iyadoo dad badani igula taliyeen in aan gaabiyo qoraaladayda, Ayaan waxaan soo qaadanayaa oo qudha dhacdooyinkii wadankeena ka dhacay maalmihii ugu danbeeyey. Sidaynu ogsoonahay, xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka waxaa dhex maray muran ay ku heshiin kari waayeen. Reer Somaliland waxay dan u arkeen in dhexdhexaadin ay lagama maarmaan tahay. Mucaaridkii ergayntii waa aqbalay, waanu joojiyey hawlihii u qorshaysnaa. Marka ergo dhinacyo is haya ay dhex galayso, qodobka ugu horeeya ee la isla qaataa waa xabad joojin. Maanta xabad ma marayso, Ilaahayna inaguma keeno, laakiin xaaladan oo kale waa joojin arimaha la isku hayo oo buuxda. Xukuumaddii intii hawsha ergadu socotay, waxay ku talaabsatay arimo fajac ku noqday inta Somaliland jecel. Waxay warqad u qortay Golaha Guurtida in ay kordhistaan wakhti xiloodkooda, hadda waaba wixii miiska saarnaa ee la isku hayey. Waxay dhaarisay guddidii la isku hayey, waxayna guddoomiye uga dhigtay xubintii wadankuna ku kala qaybsamay in ay ka mid noqoto guddida doorashooyinka. Waa waali cas oo sideedii ah! Intaa waxaa ka sii daran in umaddii anay wali wax ka odhan. Waxaa tan ugu daran ay tahay, kuwii isku sheegay in ay ergo yihiin, oo runtii u ekaa rag mudakar ah, in ay afkoodii xidheen oo ay runta wajihi kari waayeen. Ma sidaasaa ergadiinu mise marka horeba waxay dadku idin moodeen ayeydaan ahayn. Odayaashii la magac baxay, “madasha wada tashiga” ee umaddu u han wayneyd, ee ay ka eegayeen in ay u buuxiyaan kaalintan Golaha Guurtida ee maqan, waxay maalin dhawayd umadda la soo hor fadhiisteen, madaxtooyadii waa naloo diiday. Cajiib! Iyagiina halkaasay ka baxeen. Meesha ma kacaan baa maraya, waa yaab eh.
The deadly union between Somaliland and Somalia that caused catastrophe effect for Somaliland people has come to end in 18 of May, 1991